China Glass Bhodhoro IV Solution Kugadzira Line vagadziri uye vanotengesa | IVEN
IV Solution Kugadzira Line - Girazi Bhodhoro LVP
Girazi bhodhoro IV mhinduro yekugadzira tambo inonyanyoshandiswa kune IV mhinduro girazi bhodhoro re50-500ml kuwacha, depyrogenation, kuzadza nekumira, kubaya. Inogona kushandiswa kugadzirwa kweshuga, antibiotic, amino acid, mafuta emulsion, chigadziriso chemuviri uye vamiririri uye imwe mvura nezvimwewo.
Muchina uyu unoshandiswa pakushambidza kwakanaka kweiyo infusion girazi bhodhoro, uchinjana kushandisa yakajairwa mvura, yakanatswa mvura, jekiseni mvura, yakachena yakadzvanywa mweya, nyowani jekiseni mvura uye yakachena yakadzvanywa mweya kushambidza bhodhoro mukutenderera.
Laminar kuyerera sterilization tunnel inoshandiswa kugezwa vial yakaoma kuomeswa uye kubvisa kupisa, Inogona kusvika pakakwirira tembiricha 300 ～ 350 ℃, inoshanda sterilization nguva kwemaminetsi mashanu kusvika gumi.
Iine nzvimbo nhatu dzekushanda (Preheat nzvimbo, nzvimbo yekupisa, inotonhora nzvimbo).
Kuzadza, Kuchenesa, Nitrogen Kubhadharisa, Kumisa Machine
Kuzadza chikamu chinotora Germany GEMU vharuvhu yekuzadza, yakanyanya kunyatsoita.
Nitrogen kuchaja nekukurumidza mushure mekuzadza, zvakare nitrogen kudzivirira pakati peiyo nitrogen kuchaja uye kumira.
Hapana mabhodhoro asina kuzadza, hapana mabhodhoro asina kutsvaira, hapana bhodhoro risina kubhadharisa nitrogen, chengetedza iyo yekutsvaira mumatangi emhepo panguva yekuzorora, zvakadaro, ita shuwa kuti mweya wakasara mushure mekumira (kutonga mukati me1.0%).
Kuzadza uye Kumisa Machine
Aseptic mvura yekuzadza muchina yakanyatsoita uye yakagadzikana mashandiro. Iyo yekuzadza vhoriyamu inogona kugadziridzwa zvakananga kuburikidza neHMI, pano isu tine ORABS yakagadzirirwa nesimbi isina simbi laminar yemhepo kuyerera hood.
Inonyanya kushandiswa kumabhodhoro egirazi achivhara. Kuenderera mberi kushanda. Kusimudza uye kupwanya, panguva imwechete kumonera kapu. Mushure mekupedza, iyo cap ine saizi yakafanana uye kumucheto kwakatsetseka, kutaridzika kwakanaka. Yakakwira-kumhanya, yakaderera yakakuvadzwa.
1.Parate pombi yekuchenesa yepakati, hapana kuyambuka-kusvibiswa, zvinoenderana nezvinodiwa neGMP.
2.Kuzadza musoro synchronously makwara ekuzadza, kukwirira kwekuzadza kurongeka.
3.Adopt yakazara servo drive system, hapana michina yekufambisa.
4.Nitrogen kuchaja basa kunogona kugadziridzwa (usati wazadza, panguva yekuzadza, mushure mekuzadza).
5.Quick shanduko nguva yehukuru hwakasiyana hwehombodo.
Kuzadza, Nitrogen Kubhadharisa, Kumisa Machine
Kugadzira kugona 60-100BPM 100-150BPM 150-300BPM 300-400BPM
Yakaiswa saizi yebhodhoro 50ml, 100ml, 250ml, 500ml
Kuzadza kururamisa ± 1.5%
Yakatsindirwa mweya (m³ / h) 0.6Mpa 1.5 3 4 4.5
Kurema T 7.5 11 13.5 14
Saizi yemuchina (L × W × H) (MM) 2500 * 1250 * 2350 2500 * 1520 * 2350 3150 * 1900 * 2350
Pashure: Fekitori yakananga kupa Ampoule Kuzadza Machine Vagadziri - Cartridge yekuzadza Kugadzira Line - IVEN
Zvadaro: Prefilled Syringe Machine (sanganisira jekiseni)
Disposable Syringe & Tsono Production Line, Yakagadzirirwa-Syringe Machine, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Ampoule Machine À Coudre Singer, Ampoule Muchina À Coudre Led, Pre Yakazadza Syringe Kuzadza Machine,